Page 1 of 3	1. ပညာရေး	(Category)
Created on 2. နည်းပညာ	(Category)
Created on 3. ရင်သားကင်ဆာ ပညာပေး	(2017)
ရင်သားကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပေါ် ခံစားဖူးသူတွေအနေနဲ့ အချင်းချင်းမကြာခဏတွေ့ဆုံပေးပြီး အတွေ့အကြုံဗဟုသုတဖလှယ်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းဟာ ပြည်သူလူထုအတွင်းမှာ ရင်သားကင်ဆာရောဂါဂရုပြုမှုတွေ တိုးပွားလာစေနိုင်တဲ့အပြင် ရင်သားကင်ဆာရောဂါကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကို ...	Created on 19 March 2017	4. Bethlehem မြို့က ထူးခြားတဲ့ Walled Off ဟိုတယ်	(2017)
ကမ္ဘာတလွှားခရီးသွားအစီအစဉ်ကနေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသက Bethlehem မြို့ဆီကိုသွားကြရမှာပါ။ ကမ္ဘာကျော် ဗြိတိန်က Graffiti အနုပညာရှင် Banksy ရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ ဟိုတယ်တခုဆီကို သွားရမှာပါ။ နှစ်ပေါင်းဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီဖြစ်နေတဲ့ ...	Created on 19 March 2017	5. ရခိုင်ကော်မရှင် အစီရင်ခံစာ EU ထောက်ခံ	(2017)
... ရှေးမဆွကတည်းက တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နိုင်ငံမဲ့အဖြစ် ခွဲခြားဆက်ဆံခံရ မှုတွေ ပပျောက်ရေး၊ ဒေသခံအားလုံး ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး တန်းတူညီမျှ ရရှိရေးနဲ့ လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့် ...	Created on 19 March 2017	6. ကျူးဘားရဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးစနစ်	(2017)
အမေရိကန်စကားပြောမှာ သုံးနှုန်းပြောနေကြတဲ့ စကားလုံးတွေကို မကြေးမုံက ပြောပြနေတာမို့ အခုတခေါက်မှာတော့ ကျူးဘားနို်င်ငံရဲ့ အခမဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးစနစ်အကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။Authors: ဗီအိုအေ... အမေရိကန်စကားပြောမှာ ...	Created on 18 March 2017	7. ဆရာ ဆရာမတွေအတွက် VR နည်းပညာ မိတ်ဆက်	(2017)
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပညာရေးနယ်ပယ်က ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာက စာသင်ခန်းတွေကို Virtual Reality နည်းပညာအရ၊ မျက်မြင်လေ့လာနိုင်အောင် Education Software တီထွင်ပေးနေတဲ့ 3D ...	Created on 12 March 2017	8. မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ	(2017)
... ဆေးရုံရဲ့ ဆေးပညာဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးလည်းဖြစ်၊ ကျောက်ကပ်ကုသရေးဌာန၊ ဌာနမှူးလည်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာသင်မောင်ဟန်က သြစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့...ပြည်ပမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ...	Created on 11 March 2017	9. ဦးကိုနီလုပ်ကြံမှု အကြမ်းဖက်ဥပဒေနဲ့ စွဲသင့်	(2017)
... အစိုးရကို ဥပဒေပညာရှင်တွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားခံတွေကို လူသတ်မှု ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပုဒ်မ (၃၀၂) နဲ့ တရားစွဲဆိုချက်အစား အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ...	Created on 11 March 2017	10. ရေစီးနဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်	(2017)
ရေရှည်ခံစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့ နေ၊ လေ၊ ပင်လယ်ဒီလှိုင်း နဲ့ မြစ်ရေစီးတွေကနေ ပိုပြီး ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် သိပ္ပံပညာရှင် နဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ အမြဲမပြတ် ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ ...	Created on 10 March 2017	11. အင်္ဂါဂြိုလ်မှာ အာလူးစိုက်နိုင်	(2017)
လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်မြေသြဇာနဲ့ ရေအလုံအလောက်ရမယ်ဆိုရင် အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာ အာလူးစိုက်ပျိုးလို့ရမယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... လိုအပ်တဲ့ ဓါတ်မြေသြဇာနဲ့ ရေအလုံအလောက်ရမယ်ဆိုရင် အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်မှာ ...	Created on 10 March 2017	12. အာဖဂန် အမျိုးသမီးများနဲ့ တရုတ်ရိုးရာ ဝူရှုးသိုင်း	(2017)
တရုတ်ရိုးရာ ဝူရှူးသိုင်းပညာကို အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့ အမျိုးသမီးတွေကြား စတင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်အောင် အသက် ၂၀ အရွယ် ကျောင်းသူ Seema Azimi က စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။သူဟာ အာဖဂန် နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ ...	Created on 08 March 2017	13. အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းသူတွေအတွက် အထောက်အကူ	(2017)
မြန်မာနိုင်ငံကအမြင်အာရုံမသန်စွမ်းသူတွေအိုင်တီနည်းပညာကိုအသုံးပြုနိုင်အောင် မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ ဆော့ဝဲယားတွေ စတင်တီထွင်နေပေမယ့် အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းနဲ့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ လူ အရေအတွက်ကလည်း သိပ်ကိုနည်းနေသေးတဲ့အကြောင်း ...	Created on 07 March 2017	14. ဒုသမ္မတ Pence ဆုံးဖြတ်မဲနဲ့ ပညာရေးဝန်ကြီးသစ်ကို အတည်ပြု	(2017)
အမေရိကန် ပညာရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်ဖို့ အငြင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Betsy DeVos ဟာ အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းက ဒုသမ္မတ Mike Pence ရှေ့မှာ ကျန်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... အမေရိကန် ပညာရေးဝန်ကြီးခန့်အပ်ဖို့ ...	Created on 08 February 2017	15. နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဇနီး ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရှိ အန်ကော အနုပညာ ဗိသုကာ အခင်းအက	(2017)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2017/02/06/id-11689 Created on 06 February 2017	16. နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူများနဲ့ အမေရိကန် IT လုပ်ငန်းကြီးများ	(2017)
အကြမ်းဖက်သမားတွေ အမေရိကန်ထဲဝင်လာမှာကို ကာကွယ်တဲ့သမ္မတ Donald Trump ရဲ့ ပြည်ဝင်ခွင့်တားဆီး ပိတ်ပင်မှုအပေါ် အမေရိကန် နည်းပညာလုပ်ငန်းကြီးတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ ဒီပိတ်ပင်မှုက သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ ...	Created on 06 February 2017	17. မြန်မာ-ကမ္ဘောဒီယား ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်မည်	(2017)
... ကမ္ဘောဒီးယား- မြန်မာ ၂ နိုင်ငံကြား ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းနဲ့ ပညာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ သံဓိဌာန်ချခဲ့ကြတယ်လို့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့...ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင် Norodom Sihamoni ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်နဲ့ ...	Created on 05 February 2017	18. လိုင်ချီးကြောင့် ကလေးတွေသေကြောင်း သုတေသီတွေပြော	(2017)
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အမည်မသိထူးခြားတဲ့ ရောဂါတမျိုးနဲ့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မေလလယ်နဲ့ ဂျွန်လအတွင်း သေဆုံးနေတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ အစာမရှိပဲ လိုက်ချီးသီးတွေစား တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အမေရိကန် နဲ့ အိန္ဒိယ သုတေသနပညာရှင်တွေကပြော ...	Created on 04 February 2017	19. သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့ မသင့်ကြောင်းဆုံးဖြတ်	(2017)
... အဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေကတော့ တတ်သိနားလည်တဲ့ ပညာရှင်တွေ နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ပြင်ဆင်ချက်အဆိုကို အင်္ဂလိပ်လို ပြန်လည်တင်သွင်းသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ Authors: ...	Created on 02 February 2017	20. ရန်ကုန်မြို့တွင်း ရထားခရီးစဉ်	(2017)
... MJI မြန်မာ့သတင်းပညာသိပ္ပံက သင်တန်းသား ဖြိုးသော်ထက်က တင်ဆက်ထားပါတယ်။Authors: ဗီအိုအေ... လူနေထူထပ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာ YBS ဘက်စ်ကားကားလိုင်းတွေ လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း နေ့စဉ် မြို့တွင်း မြို့ပြင်သွားလာရေးအတွက် ...	Created on 26 January 2017	StartPrev123NextEnd
နံနက်စာ စားဖြစ်အောင် စားပါ။	Sidebar